Habdhaqanka galmada ee qasabka ah | ICD-11 | Ururka Caafimaadka Adduunka
Bogga ugu weyn Blog Dhaqanka Galmood ee khasabka ah 'oo loo qaybiyey Ururka Caafimaadka Adduunka
adminaccount888 9th July 2018 News Latest
Hoos waxaa ku qoran qoraallo qaraar ah oo loogu talagalay saxafiyiinta iyo dadweynaha oo ku saabsan qaybta baadhista cusub. Halkan waa summad degdeg ah a blog.
Markay ahayd 18-kii Juun 2018, qorayaasha Ururka Caafimaadka Adduunka ee Qoondaynta Caalamiga ee Cudurrada, 11th Dib-u-eegis, ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku dhawaaqaya in nooca hirgelinta ee soo socda ICD-11 hadda laga heli karo khadka tooska ah. Waxaa ka mid ahaa Cilladaha Dabeecadda Isku Galmoodka ee Isku Qasan (CSBD) markii ugu horreysay. In kasta oo ay jiraan warar xan yar oo marin habaabin ah oo lid ku ah, haddana waa run in WHO ay diidday "qabatinka sigaarka" ama "qabatinka galmada".
Dabeecadaha galmada ee qasabka ah waxaa loogu yeeray magacyo kala duwan sanadihii la soo dhaafay: "hypersexuality", "qabatinka galmada", "qabatinka galmada", "dabeecadaha galmada ee ka baxsan xakamaynta" iyo wixii la mid ah. Buugyageeda ugu dambeeya ee cudurada WHO waxay qaadaysaa talaabo loo sharciyeeynayo cilada iyadoo loo aqoonsan yahay "Cilladaha Habdhaqanka Isku Galmoodka ee Isku Khaldama" (CSBD) inay tahay cudur maskaxeed. Sida laga soo xigtay khabiirka WHO Geoffrey Reed, baaritaanka cusub ee CSBD "wuxuu dadka u sheegayaa inay ogaadaan inay qabaan" xaalad dhab ah "ayna raadsan karaan daaweyn."
War-saxaafadeedka waxaa lagu arki karaa goobta WHO halkan. Si sahlan, waxaan ku soo celinnay hoosta hoose.
War-saxaafadeedka ICD-11 wuxuu sheegayaa in lagu daro ciyaaraha sida maskaxda caafimaadka, iyo sida jismi ahaanta jinsiga hadda loo qoondeeyey.
Waxay qabataa ha sheegin baadhitaan kale oo cusub: "Dhibaatada dabeecadda jinsiga ah ee qasabka ah"Taas oo ka muuqda" Xanuunada xakamaynta waxtarka leh ".
The "Qoraalada Bixinta”Baaris kasta waxaa kujira bayaankan: "Qaab-dhismeedka code ee ICD-11 MMS waa mid deggan."
Halkan waxaa ah qoraalka ugu dambeeya ee "Ciladda jinsi-jinsi ee isku-qasba":
[6C72], waa markii ugu danbeysay oo ay bixiyaan khabiiro daryeel caafimaad oo si cad u muujiya ciladda iskaa wax u qabso ee lagu xakameyn karo dabeecadaha galmada inkastoo ay jirto cawaaqib xun. Hirgelinta dhabta ah ee qawaaniinta cusubi way kala duwan tahay, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in khabiirada caafimaadka adduunka ay isku raaceen in habdhaqanka galmada ee khasabka ah uu ku habboon yahay ogaanshaha. Waa erey ballaaran oo dallad ah oo loo isticmaali karo qof kasta oo buuxiya shuruudihiisa. "Dabeecadda galmada ee qasabka ah" sidoo kale waxa lagu magacaabaa "maandooriye ama galmo-xumo" sida uu qabo khabiir ku-takhasusay Jon E. Grant, JD, MD, MPH Maqnaanshaha hadda jira (Febraayo 2018: p.3). Baaritaanka cusub ee CSBD ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa si loo ogaado kuwa leh astaamaha la xiriira isticmaalka sigaarka ee internetka.
In ka badan 80%% dadka qaba habdhaqanka galmada khasabka ah ayaa ka warbixinaya isticmaalka saa daraadeed ama dhibaatada maskaxda.
"Isticmaalka sawir-gacmeedka dhibaatada leh waxay matali kartaa muujinta caanka ah ee khaniisnimada (sidoo kale loo yaqaan qasab galmo, takoorid galmo ama dabeecad galmo xad dhaaf ah suugaanta - Kafka, 2010; Karila et al., 2014; Wéry & Billieux, 2017) maxaa yeelay daraasado dhowr ah in ka badan 80% dadka qaba sinnaanta galmada waxay soo sheegeen isticmaalka qaawan / dhibaatada badan ee filimada (Kafka, 2010; Reid et al., 2012) ”. (Bőthe et al. 2018: 2)
Buug-tilmaameedyo caafimaad sida WHO ee Qeybinta Caalamiga ee Cudurada (ICD-11) iyo Ururka Cilmi-nafsiga Mareykanka ee Mareykanka Buug-tilmaameedka iyo Isticmaalka Macaamiisha Caafimaadka Maskaxda (DSM-5) ma samayn ku calaamadee xaaladaha caafimaadka maskaxda sida "Balwadaha" per se. Waxay doorbidaan inay adeegsadaan ereyga “Disorder.”
Ciladda "dabeecadda galmada ee qasabka ah" ayaa ka soo baxaysa qaab aan ku fashilmeynin inay xakamayso xoog-muquunis, jahwareer galmo ama dhiirigelin, taasoo keentay in habdhaqan galmo ku celcelis wakhti dheer ah (tusaale, bilaha 6 ama in ka badan).
Qaadashada Ciladda Dhibaatada Isku-xirka Isku-xirka Isku-tagga Isku-Duwidda Galmada
Dhaleeceeyayaashii hore waxay ka walaacsanaayeen in baaritaan rasmi ah oo kasta loo adeegsado in lagu daaweeyo dadka laga tirada badan yahay ee galmada iyo hababka kale ee galmada. Si kastaba ha noqotee, si loo buuxiyo shuruudaha ogaanshaha cudurka ee CSBD, dabeecadda dhibaatada leh waa inay u keentaa culeys joogto ah oo muuqda ama naafonimo weyn oo ku timaadda shaqsiyadeed, qoys, bulsho, waxbarasho, shaqo, ama meelaha kale ee muhiimka ah ee shaqeynaya Si kale haddii loo dhigo, cudurka cusubi laguma ogaado bukaanka iyadoo lagu saleynayo waa maxay dabeecada galmada ay si xor ah u galaan. Waxay ogaaneysaa bukaanka ku salaysan naafonimo joogto ah iyo cidhiidhi. Haddii dabeecadda galmada, wax kasta oo ay qaadato, natiijadu ma aha, baarista cusubi ma khuseyso.
Caqabado kale ayaa ka digay in cilad baadhista CSBD ay sababi karto in ay qalad u yeeshaan bukaannada aan dabiiciga aheyn, dhab ahaantii, qasab ku ah, iyo dhibaatadooda oo ay sababtay xukunka akhlaaqda ee bukaanka ama xirfadle. Si looga hortago natiijooyinka noocaas ah, baadhista cusubi waxay bixisaa, "Dhibaatada oo gebi ahaanba la xidhiidha xukunnada akhlaaqda ah iyo diidmada ku saabsan dareenka jinsiga, dhiirigelinta ama dabeecada kuma filna." Si kale haddii loo dhigo, bukaanku waa inuusan awoodin inuu kantaroolo dareenka kufilanaanta habdhaqanka jinsiga ee soo noqnoqonaya kuwaas oo noqday dhibaato.
Doodda Buugagga Baarista
Waxaa jiray doodo badan oo ku saabsan horudhaca daabacaadda qoondaynta cusub ee ICD-11. Xanuunka dabeecadda jinsi ahaaneed (oo lagu tilmaamayo ficil ahaan sida cudur-daar badan) ayaa loo tixgeliyey in lagu daro DSM-5 laakiin ugu dambeyntii laga saaray. Sida laga soo xigtay hoggaamiyayaasha neurosuuska, "Tani ka saariddu waxay caqabad ku noqotay ka hortagga, cilmi-baarista, iyo dadaalka daaweynta, iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee aan haysanin cadeeymo rasmi ah oo loogu talagalay dhibaatada jinsi-dhaqameed ee qasabka ah."Potenza et al. 2017)
Hadda, qaybta waalidiinta ee cusub ee Cudurka CSBD waa Ciladda Xanuunka Xakamaynta, oo ay ka mid tahay baaritaanada sida Pyromania [6C70], Kleptomania [6C71] iyo Qalalaasaha Dhibaatada ah ee [6C73]. Weli shaki kuma jiro qaybta ku haboon. Sida Yale Neuroscientist Marc Potenza MD PhD iyo Mateusz Gola PhD, cilmi-baaris ka socota Akadiyada Sayniska ee Jaamacadda iyo Jaamacadda California ee San Diego, ayaa tilmaamaya, "Soo jeedinta hadda ee kala-soocidda dhibaatada CSB-ta sidii kantaroolka xakamayntu waa mid muran leh iyada oo moodooyinka kala duwan ay ahaayeen la soo jeediyey ... Waxaa jira macluumaad soo jeedinaya in CSB ay wadaagto waxyaabo badan oo leh macaamil. "Kraus et al 2018)
Waxaa xusid mudan in la ogaado in ICD-11 ay kujirto ciladaha khamaarka ee hoos imanaya labadaba Cilladaha Sababtoo ah Dabeecadaha Maandooriyaha iyo Dhibaatooyinka Xakamaynta Rabshadaha. Marka, kala soocidda xanuunnada uma baahna inay had iyo jeer noqdaan kuwo is-dhaafsan (Bőthe et al. 2018: 2). Kala soociddu sidoo kale way beddeli kartaa waqti. Dhibaatada Khamaarista waxaa markii hore lagu sifeeyay inay tahay cilad kacsi oo ku timaadda labada DSM-IV iyo ICD-10, laakiin ku saleysan horumarka fahamka xasaasiga ah, Khamaarka Khamaarista waxaa loo qoondeeyay inuu yahay "Maandooriyaha La Xiriira Maandooriyaha" (DSM-5) iyo ah "Cillad Sababtoo ah Dabeecadda Maandooriyaha" (ICD-11). Waa suurtagal in baaritaankaan cusub ee CSBD uu raaci karo koorso horumarineed oo la mid ah tan Khamaarka Khamaarista uu leeyahay.
Iyadoo aan loo eegin sida dooddani ay u sii socoto waqti ka dib, hadda ku meelaynta CSBD ee ICD-11 waxay bixisaa aqoonsi soo dhoweyn iyo lagama maarmaanka u ah in ay jiraan dad u baahan u baahan waxqabadyo caafimaad oo wax ku ool ah si ay uga caawiso inay si fiican uga gorgortamaan dhaqankooda galmada iyo cawaaqibkooda. Waxay sidoo kale fududeyneysaa cilmi-baaris mustaqbalka loo baahan yahay ee ku saabsan habdhaqanka galmada ee dhibaatada leh.
“Waxay noqon laheyd mid qumman in la tixgeliyo sida DSM iyo Kala-soocidda Cudurrada Caalamiga ah (ICD) ay u shaqeeyaan marka loo eego hababka qeexitaanka iyo kala soocidda. Marka sidaas la samaynayo, waxaan u maleyneynaa inay ku habboon tahay in diirada la saaro khalkhalka khamaarka (oo sidoo kale loo yaqaan khamaarka noolaha) iyo sida loogu tixgeliyey DSM-IV iyo DSM-5 (iyo sidoo kale ICD-10 iyo ICD-11 ee soo socda). DSM-IV, khamaarka noolaha waxaa loo kala saaray inuu yahay "Qalalaasaha-Kicinta Xakamaynta Meel Kale Lagama Dhigin". DSM-5, waxaa dib loogu qoondeeyey "Waxyaabaha La Xiriira Maandooriyaha iyo Balwadaha." "Hab la mid ah waa in lagu dabaqo CSB, oo hadda loo tixgelinayo ka mid noqoshada cillad xakamaynta kicinta ee ICD-11 (Grant et al., 2014; Kraus et al., 2018) ". Qodobbadan ayaa laga soo qaatay Gola iyo Potenza 2018.
Markaad ka dib Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) oo kala saaraya xanuunka ciyaaraha iyo CSBD xaaladaha caafimaadka maskaxda, a warbixinta gudaheeda Guardian wargeyska ayaa sheegay in isbitaal London uu isku diyaarinayo in uu bilawga ugu horeeyo ee xarun adeega caafimaadka qaranka ee kharajkiisa adeega caafimaadka ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Dhakhaatiirta jinsiga ee meelo kale waxay arkeen korodhka macaamiisha da 'yar oo si adag u isticmaala isticmaalida barnaamijyada galmada iyo qolalka lagu sheekeysto ee internetka, iyo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda natiijada.
Sida laga soo xigtay Mateusz Gola PhD, oo cilmi-baaris ka ah Machadka Sayniska ee Booliska iyo Jaamacadda California ee San Diego, ayaa cusub ee lagu ogaanayo CSBD sidoo kale wuxuu leeyahay faa'iidooyin kale. "Waxay qeexaysaa shuruudaha ogaanshaha cad. Intaa waxaa dheer, dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee kiliinikada iyo dhakhaatiirta cilminafsiga ee cilmi-nafsiga ah ayaa hadda baranaya cudurka. Iyadoo aan laga helin aqoonsiga CSBD rasmiga ah, qaar badan oo ka mid ah xarumaha caafimaadka ayaa aan la aqoonin arrimaha ku saabsan habdhaqanka galmada. Ugu dambeyntii, baadhitaankan ayaa sidoo kale siin kara bukaanno badan oo daaweyn caymis daboolaya. "Gola ayaa intaa ku daray in baadhitaanka cusub," uusan xallin dhibaatada sida loo daweeyo CSBD si wax ku ool ah, laakiin waxay u oggolaaneysaa daraasado joogto ah, habab loo qoondeeyey, la isku halleyn karo. "
Helitaanka Helitaanka bukaanka
Shane W. Kraus, Ph.D. Kaaliyaha Professor-ka cilminafsiga iyo agaasimaha rugta caafimaadka qabatinka dabeecadda Edith Nourse Rogers Memorial Veterans Hospital, University of Massachusetts Medical School ayaa ka tiri qeybta cusub ee lagu ogaanayo cudurka: “Tani waa talaabada ugu horeysa ee wanaagsan. Ka mid noqoshada CSBD ee ICD-11 waxay u badan tahay inay kordhiso helitaanka daryeelka bukaanka (caalami ahaan iyo gudaha Mareykanka). Intaa waxaa sii dheer, ka mid noqoshada ayaa sidoo kale kordhin doonta maalgelinta cilmi baarista taas oo taariikh ahaan diirada saartay ciladaha caafimaadka maskaxda ee la ogaan karo. Intaa waxaa dheer, waxaan u maleynayaa inay yareyneyso ceebeynta dadka ay dhibaatadu saameyneyso isla markaana ay kor u qaadi doonto waxbarashada adeeg bixiyaasha ee arinta.
Tababar Xirfadaha Caafimaadka
Ujeedada rasmiga ah ee sii deynta ICD-11 ee dhowaan la soo dhaafay waa in loo oggolaado wadamada in ay tababaraan xirfadlayaasha caafimaadka bukaankooda. Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale ku booriyeen in daaweeyayaasha iyo lataliyayaashu ay noqdaan kuwo la tababaro oo si ka wanaagsan loo fahmo dabeecadaha galmada ee qasabka ah:
Waxa kale oo muhiim ah in bixiyeyaasha daryeelka (sida, kiliinikada iyo la-taliyayaasha) ee shakhsiyaadka laga yaabo inay caawimaad ka raadsadaan ay yaqaanaan CSBs. Intii lagu guda jiray daraasadeena ku lug leh maadooyinka 3,000 ee raadinaya daaweynta CSB, waxaan si joogta ah u maqalnay in shakhsiyaadka qaba CSB ay la kulmaan caqabado badan inta ay raadinayaan caawimaad ama ay la xiriiraan rugaha caafimaadka (Dhuffar & Griffiths, 2016). Bukaanku waxay soo tebiyaan in rugaha caafimaadku ay ka fogaan karaan mawduuca, sheeg in dhibaatooyinkaas aaney jirin, ama ay soo jeediyaan in qofku leeyahay jinsi aad u sarreeya, oo waa inuu aqbalo halkii uu daaweyn lahaa (inkastoo ay taasi tahay, shakhsiyaadkaas, CSBs waxay dareemi karaan ego-dystonic iyo hogaanka si ay u keento cawaaqib xumo badan). Waxaan aaminsanahay in shuruudaha si fiican loo qeexay ee loogu talagalay dhibaatooyinka CSB ay kor u qaadi doonaan dadaalka waxbarashada oo ay ka mid yihiin horumarinta barnaamijyada tababarka ee ku saabsan sida loo qiimeeyo loona daaweeyo shaqsiyaadka leh calaamadaha cudurka CSB. Waxaan rajeyneynaa in barnaamijyadani ay qayb ka yihiin tababarka daaweynta caafimaadka dhimirka, dhakhaatiirta maskaxda, iyo bixiyeyaasha kale ee daryeelka caafimaadka maskaxda, iyo sidoo kale bixiyeyaasha kale ee daryeelka oo ay ka mid yihiin bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah sida dhakhaatiirta guud. "Kraus et al 2018)
The Abaalmarinta Abaalmarinta waa hay'ad samafal waxbarasho hormood ah taas oo ka dhigaysa sayniska galmada iyo jacaylka inay heli karaan dhagaystayaal ballaadhan. Diiraddeenu waxay ku saabsan tahay saameynta sawir-gacmeedka qaawan ee internetka ee dhalinyarada iyo dhalinyarada. Waxaa naloo aqoonsaday Kulliyadda Boqortooyada ee Dhaqaatiirta Guud ee London si aan ugu qabanno aqoon-isweydaarsiyo 1-maalin ah oo loogu talagalay xirfadlayaasha saameynta sawir-gacmeedka internetka ee caafimaadka maskaxda iyo jirka. Tani waxay taageertaa ujeedooyinka Ururka Caafimaadka Adduunka oo war-saxaafadeedkooda hoose uu hoosta ka xarriiqayo baahida loo qabo tababarka xirfad-yaqaannada. Waxaan sidoo kale wax ku baranaa iskuulada waxaanan bixin doonnaa qorshooyin casharro ah iyo tababarro macallimiinta sannadkan gudihiisa. Waxaan u fidinaa adeegyo la-talin ururada doonaya inay horumariyaan barnaamijyada wacyi-gelinta ee waxyeellada u leh galmada.
Wareysiyada ama macluumaad dheeraad ah oo ay ku jiraan nuqulo buuxa oo ilaha xogta la soo sheegay, fadlan la soo xiriir info@rewardfoundation.org.
Qoraalka buuxa ee War-saxaafadeed ICD-11.
WHO oo sii deysay New Classification of Cudurrada Caalamiga ah (ICD 11) 18 June 2018 News Release Geneva
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa maanta sii deynaya Qeybaha Caalamiga ah ee Cudurrada (ICD-11).
ICD waa aasaaska lagu aqoonsado isbeddellada caafimaad iyo tirakoobka adduunka oo dhan, waxaana ku jira qiyaastii 55 000 lambarro gaar ah oo loogu talagalay dhaawacyada, cudurrada iyo sababaha dhimashada. Waxay bixisaa luuqad guud oo u oggolaanaysa xirfadlayaasha caafimaadka inay wadaagaan macluumaadka caafimaadka adduunka oo dhan.
"ICD waa shey uu WHO dhab ahaantii ku faani karo," ayuu yiri Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Agaasimaha Guud ee WHO. "Waxay inaga siinaysaa inaan fahamno wax badan oo ku saabsan waxa dadka ku dhaco oo ay u dhintaan, oo ay talaabo ka qaadaan sidii looga hortagi lahaa silica iyo badbaadinta nolosha."
ICD-11, oo in ka badan toban sano samaysay, waxay ku siisaa horumar ballaadhan noocyadii hore. Markii ugu horreysay, waa gabi ahaanba elektaroonig waxayna leedahay qaab aad u tiro badan oo saaxiibtinimo leh. Waxaana jiray ku lug lahaansho aan horay loo arag oo shaqaalaha daryeelka caafimaadka ah oo ku soo biiray shirarka iskaashiga isla markaana soo gudbiyay soo jeedimo. Kooxda ICD ee ku sugan xarunta WHO waxay heleen in ka badan 10 000 oo soo jeedinno ah in dib loo eego.
ICD-11 waxaa lagu soo bandhigi doonaa Golaha Caafimaadka Adduunka May 2019 si loogu dhaqan galiyo Dawladaha Xubinta ka ah, waxayna hirgelin doonaan 1 January 2022. Siidayntan ayaa ah horay u sii hormarinaysa waddamada u oggolaanaya inay qorsheeyaan sida loo isticmaalo version cusub, loo diyaariyo tarjumaad, iyo tababaro xirfadlayaasha caafimaadka ee dalka oo idil.
ICD waxaa kale oo ay isticmaalaan ceymiyaal caafimaad oo koontooyinkoodu ku xiran tahay codsiga ICD; maamulayaasha barnaamijka caafimaadka qaranka; khabiiro uruurinta xogta; iyo kuwa kale ee raadinaya horumarka caafimaadka adduunka iyo go'aaminta qoondaynta caafimaadka.
ICD-11 cusub ayaa sidoo kale ka tarjumeysa horumarka daawada iyo horumarinta fahamka sayniska. Tusaale ahaan, qawaaniinta la xidhiidha iska caabinta antimicrobia ayaa si aad ah ula socdaan Nidaamka Kormeerka Badbaadada Caalamiga ah (GLASS). ICD-11 waxay sidoo kale awood u leedahay inay qabato xogta ku saabsan amniga daryeelka caafimaadka, taas oo micnaheedu yahay dhacdooyinka aan loo baahnayn ee dhaawici kara caafimaadka - sida hawlaha shaqo la'aanta ee cusbitaallada - waa la aqoonsan karaa lana yareeyaa.
ICD-du cusub ayaa sidoo kale ku jira cutubyada cusub, mid ka mid ah dawooyinka dhaqanka: inkastoo malaayiin qof oo isticmaala daawada dhaqameedka adduunka oo dhan, weligeed laguma darin nidaamkan. Qayb kale oo cusub oo ku saabsan caafimaadka galmada ayaa isku keenta shuruudo hore loogu qoondeeyay siyaabo kale (tusaale, jinsiga jinsiga ayaa ku qoran xaaladaha caafimaadka maskaxda) ama wuxuu si kala duwan u sharaxay. Cudurka gaming ayaa lagu daray qaybta ku saabsan xanuunka halista ah.
"Mabda'a muhiimka ah ee dib-u-eegistaan ​​wuxuu ahaa in la fududeeyo qaabka codka iyo qalab elektaroonig ah - tani waxay u oggolaan doontaa xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka in ay si sahlan oo buuxda u diiwaan galiyaan xaaladaha," ayuu yidhi Dr Robert Jakob, Hogaamiyaha Kooxda, Qaybaha Qorsheynta Jadwalka iyo Heerarka, WHO.
Dr Lubna Alansari, Kaaliyaha Agaasimaha Guud ee Caafimaadka Metrics iyo Cabbirka, wuxuu yiri: "ICD waa aasaaska xogta caafimaadka iyo ICD-11 waxay soo bandhigaysaa aragtiyo cusub oo ku saabsan qaababka cudurka."